डिसेम्बर 2, 2018 डिसेम्बर 2, 2018 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, पानी, स्वस्थ जीवन
साधारणतया ६ देखि ८ घन्टासम्म सुतिन्छ । त्यसैले यो बीचमा पानी पिइएको हुँदैन । लामो अन्तरालको बीचमा जब बिहान उठिन्छ । सबैभन्दा पहिले पानी पिउनुपर्छ । त्यसले शरीरको अनावश्यक कुरा पनि बाहिर निकाल्छ ।
औषत युवालाई पानी कति आवश्यक छ ?
पोषण विज्ञहरुका अनुसार औषत व्यक्तिलाई दैनिक ८ गिलास पानी चाहिन्छ । हामीले सामान्यतया तीन गिलास पानी पिसाबमार्फत् र अन्य दुई गिलास श्वास प्रश्वास तथा पसिनमार्फत खर्च गरेका हुन्छौँ । तसर्थ शरिरबाट गएको पानी पूर्ती गर्न पनि हामीलाई दैनिक सो परिणाममा पानी पिउनु आवश्यक छ । भारतको दी इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनका अनुसार महिलाले दैनिक ९ गिलास र पुरुषले ११ गिलास पानी पिउनुपर्छ ।
आफ्नो शरीरमा पानी पुगेको छ,छैन भन्नेबारे पिसाबबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । हलुका पहेँलो रङको पिसाबलाई सामान्य मानिन्छ । यदि पिसाब गाढा पहेँलो या सुनौलो रङको छ भने पानीको मात्रा नपुगेको भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
यस्तो वेला पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ पिसाबको रङ हेरेर पानी पुगेको नपुगेको पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । भिटामिन बी कम्प्लेक्सजस्ता औषधि सेवन गर्दा पनि पिसाबको रङ गाढा पहेँलो देखिन सक्छ ।
यसका साथै अन्य केही औषधिहरू सेवन गर्दा पिसाबको रङ परिवर्तन हुन्छ । जब हामी धेरै कसरत गर्छोैँ सो समयमा शरीर धेरै तातो हुन्छ । त्यतिवेला तुरुन्त पानी पिउनु राम्रो हुँदैन । यदि पिउनैपर्ने भएमा पनि दुई गिलासभन्दा बढी सकेसम्म नपिउनु नै फाइदाजनक हुन्छ ।
पानी पिउनुका फाइदाहरू
← ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशीको यौन व्यबहार कस्तो हुन्छ ?
नेत्रज्योति र स्मरणशक्ति बढाउन →
उच्च रक्तचाप घटाउने उपायहरू
मार्च 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “स्वस्थ जीवनको लागि कति र कसरी पानी पिउने ?”